ईंकजेट प्रिन्टरहरूको लागि ईंकजेट विनाइल स्टिकर पेपर - क्रिस्टल कोड टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
Inkjet Vinyl स्टिकर
के तपाइँ कहिल्यै आफ्नो इंकजेट प्रिन्टरको साथ विनाइलमा सिधा प्रिन्ट गर्न चाहानुहुन्छ? यो उत्तर हो! क्रिस्टल कोड 'ईन्कजेट प्रिन्ट योग्य विनाइलको ब्रान्ड एक प्रकारको प्रिन्ट गर्न योग्य स्टीकर पेपर हो जुन विशेष रूपमा भित्ता र सपाट सतहहरूको लागि बनाइएको हो। स्थायी चिपकने एक नन-घर्षण उत्पादनमा परिणाम दिन्छ जुन घर प्रोजेक्टहरूको लागि उपयुक्त छ। यो ईंकजेट वाटरप्रूफ प्रिन्ट गर्न योग्य विनाइलमा सेतो मैट फिनिश छ, सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिने सतह बनाउँदै। प्रिन्ट गर्न योग्य विनाइल स्टीकर पानाहरू भित्ता भित्ता चित्रहरू, वाटरप्रूफ डेकल्स, अनौंठो पर्खाल कागजातहरू, र स्थायी स्टिकरहरूको लागि उत्कृष्ट हो।
हाम्रो स्टिकी-ब्याक इंकजेट प्रिन्टेबल Vinyls ग्लोस, म्याट वा क्लियर (पारदर्शी) समाप्त हुन्छ र कुनै पनि ईंकजेट प्रिन्टरको सूट गर्दछ। यस श्रेणीका पानाहरू स्थानान्तरण गर्न र स्टिक-अन पाठ, छवि वा कुनै संयोजनको रूपमा कुनै चिकनी सतहमा उदाहरणको लागि दुईको संयोजनको प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईको ल्यापटप वा फोनका लागि आफ्नै अनौंठो शैली सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ, वा अन्य सडक प्रयोगकर्ताहरूका लागि हाँसो ल्याउन चाहनुहुन्छ, तब विनाइल सेल्फ-चिपकने तपाईंको लागि भने। तपाई ल्यापटप र फोनका लागि छाला, र बम्पर / कार विन्डो स्टिकरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो विनाइल फिल्म स्पष्ट, म्याट र ग्लोसमा आउँदछ, जुन तत्काल सुक्खा र पानी प्रतिरोधी हो, त्यसैले तपाईं आफ्नो डिजाइनको लागि उत्तम फिनिश रोज्न सक्नुहुन्छ। चमकदार र म्याट भिन्नलहरू जलरोधक हुन्छन् यदि पानीमा छरित गरियो वा वर्षामा छोडियो भने। यो रब्ब वा उच्च पावर जेट वा स्पन्जको साथ धुनुहुँदैन। यस्तो अवस्थामा थप वाटरप्रूफिंग आवश्यक हुन सक्छ।
कुनै महँगो उपकरणको लागि केवल मानक ईंकजेट प्रिन्टर र मसीहरू आवश्यक पर्दैन। तपाईको डिजाईन छनौट गर्नुहोस्, र मात्र प्रिन्ट गर्नुहोस्, तस्विर जो उच्च रिजोलुसन हो, जीवन्त र colors्गका साथ, तपाईले डिजाईन गोलो काट्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहानु भएको सतहमा टाँस्न सक्नुहुन्छ।
चिपकने: पानी-आधारित स्थायी
आउटडोर टिकाऊपन: १ + बर्ष
सबै डेस्कटप ईंकजेट प्रिन्टरको साथ मुद्रण योग्य
उच्च रिजोलुसन र स्पष्ट छवि गुणवत्ता
अधिकतम टिकाऊपन र पानी प्रतिरोधी परिणामहरूको लागि, उत्कृष्ट परिणामहरूको लागि, विशेष गरी लामो समयदेखि चल्ने रंग गुण र बाहिरी उपयोग संरक्षणको लागि, हामी निम्न सिफारिस गर्दछौं:
UV मसीले छाप्नुहोस्
पूर्ण २ 24 घण्टा ड्राई टाइमलाई अनुमति दिनुहोस्
पूर्ण UV प्रतिरोधी सिलर स्प्रे लागू गर्नुहोस् पूर्ण जलरोधक डेकलको लागि
एक शक्तिशाली चिपकने र जलरोधक स्थायित्वको साथ बनेको, यी बहुमुखी स्टीकर पानाहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ र बहु धुने मार्फत समातिन्छ। स्थायी स्टिकरहरू, वाटरप्रूफ डेकल्स र अद्वितीय भित्ते कलाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अनुकूलन डिजाइनहरू प्रिन्ट गर्न म्याट फिनिश प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रिन्ट गर्न सजिलो
पानीमा आधारित चिपकने र म्याट प्रिन्ट गर्न सकिने सतहले यस्तो उत्पादन सिर्जना गर्दछ जुन कुनै घर परियोजनाहरूका लागि उत्कृष्ट छ। पेसालाई कुनै पनि ईk्कजेट प्रिन्टरमा पेशेवर गुणस्तर स्टिकरहरूको लागि फीड गर्नुहोस्। स्थायी अनुप्रयोगहरूको साथ, यो टिकाऊ चिपकने अनुकूलन व्यवसाय स्वैग आइटम, पार्टी पक्ष वा निजीकृत उपहार बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रंग गर्न सच्चा
र paint वा स्क्रिन प्रिन्ट मसीको विपरीत, हाम्रो मुद्रणयोग्य विनाइल प्रकाश वा गाढा सामग्रीहरूमा रंग हुन सत्य रहनेछ। तपाईंको डिजाइनहरू पप बनाउनुहोस् र प्रत्येक मुद्रणयोग्य विनाइल शिटको साथ एक किसिमको सिर्जना गर्नुहोस्
चाहे तपाईं एक जोडी कैंची वा शिल्प कटर मन पराउनुहुन्छ, हाम्रो vinyl सजिलो प्रिन्ट र कट डिजाइनका लागि उत्कृष्ट छ। शुरुवातकर्ता वा विशेषज्ञ क्राफ्टरहरूको लागि एकैचोटि उत्कृष्ट, यो शुरुआती मैत्री सामग्री कुनै पनि मानक ईंकजेट प्रिन्टरको साथ प्रयोग गर्न सजिलो छ र लगभग तुरून्त लागू गर्न सकिन्छ।
तपाईंको विनाइल शिटहरूमा छाप्नु अघि:
तपाईको छविको टेप प्रतिलिपि छाप्नुहोस् कागजको नियमित पानाहरूमा सुझाव दिईएको दिशानिर्देशहरूको आधारमा हामीले समर्थित प्रिन्टर सेटिंग्समा सूचीबद्ध गरेका छौं। तपाईंले अन्तिम प्रिन्ट प्राप्त नगरेसम्म समायोजन गर्नुहोस् तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तपाईको पाना आकार 8..5 बाय ११ इन्च पानाको लागि सेट गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाइँको विनाइल पानाहरू घुसाउँदै:
तपाइँको विनाइल पाना घुसाउनुहोस् भनेर निश्चित गर्नुहोस् ताकि प्रिन्टि the चम्किला चमकदार पक्षमा जान्छ। पछाडि छेउमा जुन सामान्य कागजको रूपमा महसुस हुन्छ, छिटो नै छनौट गर्न सकिन्छ किनकि तपाईं आफ्नो छनौट गरिएको माध्यममा आफ्नो स्टीकर लागू गर्न तयार हुनुहुन्छ।
कागज जामबाट बच्न, कृपया एक पटकमा एउटा पाना मात्र खसाल्नुहोस्।
मसीले ड्राईड गर्दा मुस्कुराउनबाट जोगिन कृपया भर्खरै छापिएको पानाहरूलाई कम्तिमा minutes मिनेट सुकाउन अनुमति दिनुहोस्।
ब्याकिंग हटाउने सहजताको लागि, तपाइँको नयाँ डिजाइन गरिएको प्रिन्ट काट्ने बेलामा कुनै पनि कुनामा चाँडो र सजिलो पिलको बाहिर गोल गर्नुहोस्।
एक नयाँ विनाइल स्टिकर लागू गर्नु अघि तपाईंको छनौट गरिएको माध्यम सफा र राम्ररी सुकाउनुहोस्।
स्थायी स्टिकर, क्राफ्टि and र DIY प्रोजेक्टहरू, डेकल्स, बोतलहरू र कन्टेनरहरूको लागि लेबलहरू, स्क्र्यापबुक, भित्ता भित्ताहरू, कार स्टिकरहरू, सानो व्यापार उत्पाद लेबल र अधिकको लागि उत्तम।
ब्राण्ड क्रिस्टल कोड
फेसस्टक पेपर सेल्फ चिपकने वाला इंकजेट प्रिन्ट गर्न योग्य सिंथेटिक पेपर, पीपी, पीईटी
आकार .5.। * ११ इंच
सामाग्री १०० मुद्रण कोटिंगको साथ माइक्रो विनाइल सामग्री
कागज समाप्त म्याट, चमकदार
अनुप्रयोग प्रिन्टर इंकजेट प्रिन्टर, लेजर प्रिन्टर
ग्लू पानीमा आधारित स्थायी चिपकने
लाइनर बाक्लो सेतो लाइनर, ग्लासिन लाइनर
समारोह वाटरप्रूफ, तेल प्रूफ, यूभी प्रमाण
प्याकिङ प्लास्टिक फिल्म, कागज दफ़्ती
समर्थित ईंकजेट प्रिन्टर सेटिंग्स:
मुद्रण गुणवत्ता-उच्च अनुकूलन अन्तर्गत अधिकतम ठिकको रूपमा सेट
मिडिया प्रकार-उच्च चमकदार फोटो
प्रिन्ट क्वालिटी-फोटो क्वालिटी चमकदार फिल्म
मिडिया प्रकार- अनुकूलन र उन्नत सेटिंग्स अन्तर्गत, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि रिजोलुसन १ 14 d० dpi वा उच्च सेट गरिएको छ
सामसु,, तीव्र, कोडक र अन्य
प्रिन्टरहरू पनि समर्थित छन्
कृपया माथि सूचीबद्ध गरे जस्तै समान सेटिंग्स चयन गर्नुहोस्
चाहे तपाईले इंकजेट प्रिन्टर बम्पर स्टिकर वा वाटरप्रूफ उत्पादन लेबल बनाउनको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने हाम्रो सेतो वाटरप्रूफ विनाइलले तपाईंलाई टिकाऊ, वाटरप्रूफ, स्थायी चिपकने लेबल र स्टिकरहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ, केवल तपाईको घर वा व्यापार ईंकजेट प्रिन्टर प्रयोग गरेर। यस अनौंठो विनाइल सामग्रीले वाटरप्रूफ इंकजेट उत्पादनको लागि अनुमति दिन्छ यद्यपि प्रायजसो इंकजेट मसीहरू पानीमा घुलनशील हुन्छन्। यस मिडियामा चित्रित विशेष फिज मसीले दाग लगाएको छ त्यस्तै प्रकारले फलको रसले टि-शर्टलाई दाग दिइन्छ। यो मिडिया कुनै पनि ईंकजेट प्रिन्टरको साथ काम गर्दछ।
अनुप्रयोगहरू: धेरै ग्राहकहरूले हाम्रो सेतो वाटरप्रूफ विनाइल प्रयोग गर्छन् उनीहरूको आफ्नै अनुकूलित बम्पर स्टिकर बनाउन। किन स्टिकरहरू विशाल मात्रामा सिर्जना गर्न भुक्तान गर्नुहुन्छ, यति थोरै वा जति तपाईं चाहानुहुन्छ बनाउँनुहोस्, अहिल्यै तपाईको स्वामित्व भएको प्रिन्टर मात्र प्रयोग गर्दैछ, र यो मिडिया। यो मिडिया केवल बम्पर स्टिकर भन्दा बढी बनाउँछ तथापि, हार्ड टोपी लोगो, गाडी ग्राफिक्स, मोटरसाइकल ग्राफिक्स, र रंगीन स्क्र्याप किताब शेयर हाम्रो ग्राहकहरु लाई यस मीडिया को लागी को उपयोग मात्र केहि हो।